okuzinzileyo kwepakethe eyodwa yezintambo nezintambo Abakhiqizi - China iphakethe elilodwa lokuzinzisa kwentambo nezintambo abahlinzeki nefektri
Ikhebuli yenethiwekhi ye-UL90, PVC yocingo oluhlanganisiwe lwentambo eyodwa yocingo lwentambo kagesi yethusi yentambo
I-Aimsea ibilokhu ithuthukisa, ikhiqiza futhi imaketha okuqinile, ukusebenza okuphezulu kweCalcium Zinc (CaZn) okuzinzileyo okudizayinelwe ukuhlangabezana nezidingo zombili zezicelo ezisezingeni eliphakeme zokugunda nokufaka imboni yekhebula. CaZn anhlobonhlobo engabizi ukucutshungulwa stabilizers ezithuthukisa kakhulu ukusebenza eseqedile PVC ikhebula compounds, ahlinzeke kakhulu ukushisa ukuzinza kanye nezici kagesi, umbala kokuqala nokuqina umbala, efanelekayo ukukhanya futhi esindayo calcium omnyama, wire emhlophe futhi ikhebula, omuhle kakhulu ukuzinza okushisayo, efanelekile ngejazi lekhebula lamandla.
I-UL80, i-PVC Stabilizers eguquguqukayo yocingo lwe-PVC ikhebula le-coaxial fiver elisontekile
Izisimamisi zethu ze-PVC ezisetshenziselwa kakhulu ikhebula le-Twisted pair zivame ukusetshenziselwa ukuxhumana ngocingo kanye namanethiwekhi amaningi wesimanje we-Ethernet. Luhlobo lwezintambo lapho abaqhubi besekethe elilodwa besontekile ndawonye. Izintambo ezimbili zakha isifunda esingadlulisa imininingwane. Futhi lezi zibhangqwana zihlanekezelwe ndawonye ukuvikela i-crosstalk, umsindo odalwa ngababili abaseduze. Ikhebula le-Coaxial, noma ikhebula le-coax, lenzelwe ukudlulisa amasiginali wemvamisa ephezulu. Inzuzo ukuthi iCongo ibomvu ngocingo olumnyama nekhebula, elifanele ifomula ekhanyayo ye-calcium, elifanele ibhantshi lekhebula le-powder nokuqina okuhle kakhulu kokushisa.
I-UL105, i-PVC stabilizer yezintambo zokufaka ucingo ngocingo
Uhlelo lwe-Stabilizer lunomthelela omkhulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kwempilo yezintambo ze-PVC. Inika amandla ukwenziwa kahle kwezintambo nezintambo, izintambo zomhlaba, izintambo zokufaka, ikhebula lokuxhumana ngocingo futhi inikezela ngemfanelo ethile emikhiqizweni eqediwe-kufaka phakathi ukuzinza okuhle kokushisa nezakhiwo zikagesi, umbala wokuqala nokuqina kombala, efanelekile ekukhanyeni nasesindayo se-calcium emnyama, ucingo olumhlophe nentambo, ukuzinza okushisayo okuhle kakhulu, efanelekile ngejazi lekhebula lamandla.
ICalcium Zinc Stabilizer yezintambo ze-5G Olayini bezingcingo izintambo zikagesi
I-PVC ivame ukusetshenziselwa ukugqoka ikhebuli kagesi ka-5G ngenxa yezindawo zayo ezinhle kakhulu zokuvikela ugesi nokuhlala kwe-dielectric. I-PVC ijwayele ukusetshenziswa kukhebuli yamandla kagesi aphansi (kufika ku-10 KV), olayini bezokuxhumana, kanye nezintambo zikagesi. Uhlelo lokuzinza lunomthelela omkhulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kwempilo yezintambo ze-PVC. Ingakwazi ukukhiqiza kahle izintambo nezintambo, futhi inikeze umkhiqizo ophelile izakhiwo ezithile-kufaka phakathi ukuzinza okuhle okushisayo nezakhiwo zikagesi, umbala wokuqala nokuqina kombala, izakhiwo ezinhle zemishini, ukusabalalisa kwe-stabilizer. Isisimamisi seCa / Zn sihlala sengezwa ocingweni nasekuhlanganisweni kwekhebula nakumahlanganisi webhatyi ukukhulisa ukuguquguquka futhi kwehlise ukuqina. Kubalulekile ukuthi isisimamisi esisetshenzisiwe sibe nokuhambisana okuphezulu ne-PVC, ukungazinzi okuphansi, izakhiwo ezinhle zokuguga, futhi kungabi ne-electrolyte. Ngaphandle kwalezi zidingo, ama-plasticizers akhethwa ngezidingo zomkhiqizo ophelile engqondweni.
I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, PVC Izithasiselo, I-PVC One Pack Stabilizer, Isisimamisi se-PVC, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, I-PVC Heat Stabilizer,